Laser tingcha Machine, Laser osise Machine, Galvo Laser Machine - Golden Laser - 体彩会开欧洲杯,在线买猜球平台软件,体彩竞彩网世界杯冠军
Vision Laser tingcha Machine
Flatbed Laser tingcha Machine
CO2 Galvo Laser igwe
Digital Laser Die tingcha Machine
Eriri Laser tingcha Machine
Tube / Pipe Laser tingcha Machine
Mpempe akwụkwọ Mpempe Akwụkwọ
Dual Metal mpempe akwụkwọ & tube &cha
Ctsgbọ Mmiri Ventilation
Sandpaper Sanding Disks
Kapeeti & Mat
Gịnị kpatara Golden Laser
Anabata gị ọlaedo laser
Golden Laser-elekwasị anya na-enye ọgụgụ isi, digital, na akpaghị aka laser ngwọta.
Emeputa nke laser usoro maka ịcha, osise na akara. The ọkachamara keCO2 laser ọnwụ igwenaGalvo laser igwe.
Site na nyocha nke mbụ na nyocha nke ngwa gị na ihe eji mepụta gị na ụlọ ọrụ akọwapụtara maka ọzụzụ maka ndị ọrụ yana ọrụ ụwa niile - LASER GOLDEN na-enye azịza laser zuru oke, ọ bụghị naanị otu igwe!
CO2 laser ọnwụ
Ọhụụ laser ọnwụ
LASER nwụrụ cutter
Nodị No.:JMCCJG / JYCCJG Series
Ezubere usoro a CO2 flatbed laser cutting machine nke emere maka akwa akwa na ngwa nro na-akpaghị aka ma na-aga n'ihu. N'ịgba site gia na ogbe na servo moto, laser cutter awade kasị elu ọnwụ ọsọ na osooso.
Myọcha Cloth Laser tingcha Machine maka Industrial filtration Industry
High nkenke gia na ogbe chụpụrụ. Tingcha ọsọ ruo 1200mm / s. CO2 RF laser 150W ka 800W. Agụụ ebu usoro. Auto-feeder na erughị ala mgbazi. Adabara ịcha nyo ákwà, iyo ute, polyester, eyi, faiba glaasi, PTFE na ulo oru akwa.
Nodị No.:JMCZJJG (3D) -250300LD
Fabric Air duct Laser tingcha Machine
A Nchikota nke nnukwu format X, Y axis laser ọnwụ (trimming) na elu na-agba Galvo laser perforating (laser ịkpụ oghere). Ezubere ya maka ịcha nke ikuku ventilashion (sock duct, sox duct, duct sox, sock duct, textile air duct, sock air, sox air)
Nodị No.:JYCCJG-160600LD / 160900LD / 1601300LD
Ultra-ogologo Isiokwu Size Laser tingcha Machine
Extra Long Cuting Bed- Ọpụrụiche6 Mita na 13 Mitaakwa nha maka ihe ndị ọzọ ogologo, dị ka ụlọikwuu, akwa akwa, parachute, paraglider, canopy, marquee, okwuchi windo, parasail, sunshade, ụgbọelu ụgbọelu…
Nodị No.:JMCZJJG (3D) 170200LD
Galvo & Gantry Laser osise Cutting Machine maka Textile, Akpụkpọ anụ
Sistemụ laser a na-agwakọta galvanometer na XY gantry. Galvo na-enye ọsịsọ dị elu, etching, perforating and cutting of thin materials. XY Gantry na-enye ohere nhazi nke profaịlụ buru ibu ma sie ike.
Nodị No.:ZJJF (3D) -160LD
Nyefee na Nyefee Flying Fabric Laser osise Machine
3D ike Galvo usoro, gụchara na-aga n'ihu osise marking na otu nzọụkwụ. Teknụzụ laser "na ofufe". Adabara nnukwu format ákwà, akwa, akpụkpọ anụ, denim, Eva osise.
Nodị No.:ZJ (3D) -9045TB
High Speed Galvo Laser osise Machine maka Akpụkpọ anụ Akpụkpọ ụkwụ
CO2 RF metal laser 150W 300W 600W. 3D ike galvanometer akara usoro. Akpaghị aka elu na ala axis Z. Automatic mgbagharị zinc-ígwè alloy n'ụgbụgbọ mmanụ acomụ na-arụ ọrụ table.
Nodị No.:ZJ (3D) -15050LD
Galvo Laser Perforating tingcha Machine maka Sandpaper Abrasive Disks
Nnukwu usoro galvanometer scanning system. Otutu uzo laser ka iwelie oru. Akpaka nri na rewinding - ebu…
Sublimation Fabric Laser cutter maka egwuregwu
Vision laser bụ ezigbo maka ịcha digital ebi akwụkwọ sublimation akwa akwa nke niile shapes na nha. Igwefoto na-enyocha akwa ahụ, chọpụta ma mata akara ngosi e biri ebi, ma ọ bụ bulie akara ndebanye aha ma bipụ usoro ndị ahọpụtara na ọsọ na izi ezi.
Independent Dual Head Vision Camera Laser tingcha Machine
The onwe ha abụọ isi laser ọnwụ usoro na-ahụ n'ụzọ zuru okè jikọtara na smart ọhụụ usoro, na n'ihu kachasị na chọrọ nke e biri ebi ndịna nhazi.
GoldenCAM Igwefoto Ndebanye aha Laser Cutter
High nkenke ndebanye aha akara na ọgụgụ isi deformation ụgwọ maka n'ụzọ ziri ezi laser ọnwụ nke dai dai sublimation biri ebi logos, akwụkwọ ozi na nọmba.
The nnukwu ọhụụ laser cutter bụ akpan maka dijitalụ ebipụta ụlọ ọrụ - na-amị enweghị atụ ike ịrụcha obosara format digitally e biri ebi ma ọ bụ dai-sublimated akwa ndịna, ọkọlọtọ na adụ signage.
Nyefee na Nyefee Label Laser Die tingcha Machine
Dieless laser ọnwụ na converting ngwọta maka labelụ gụchara. Onye na-agụ QR koodu na-akwado mgbanwe na-akpaghị aka na ofufe. BST Web Guide na-eme ka ịtọghe na rewaị ọzọ.
Label Laser Die tingcha Machine
LC230 bụ kọmpat, akụ na ụba na n'ụzọ zuru ezu dijitalụ laser agwụ igwe na kacha web obosara 230mm. Ọ bụ nhọrọ magburu onwe ya maka obere ọsọ dijitalụ. Chụ àjà efu mgbanwe oge na-adịghị anwụ efere na-eri.
Industlọ ọrụ na-ekpo ọkụ
Anyị na-ahụ maka ịchacha laser na ihe ngwọta maka ọtụtụ ngwa. Ndị a bụ ụfọdụ ngwa anyị na-arụ ọrụ na ya.
Họrọ ụlọ ọrụ gị: ihe ngwọta laser kacha adabara gị.
Na ike technology ọhụrụ, Golden Laser bụ ike na-enye ahaziri laser igwe na ngwọta, mee ka gị na mmepụta ihe oru oma na uru.
Gịnị kpatara laser
Dị ka oge na-eme nkà na ụzụ ọhụrụ, laser na-emepe emepe na-enweghị atụ uru, dochie ọzọ na ndị ọzọ omenala Filiks.
Laser Systems Broshuọ
About Golden Laser (PDF faịlụ)
Na-enye nkwado ọrụ mgbe niile. Ndị injinia dị maka igwe ọrụ na mba ofesi maka ọrụ ntinye, ọrụ ọzụzụ na ọrụ ndozi.
Lee anya ebe a maka ozi gbasara ụlọ ọrụ dị mkpa yana akụkọ na ihe omume anyị na nso nso a.
Laser tingcha Akwụkwọ mmado, na Mgbanwe, High-Speed na Special-Mee Cutcha ...
Laser ọnwụ ọnwụ igwe kwesịrị ekwesị maka kpọọ dijitalụ n'ịtụgharị na dochie omenala mma anwụ ọnwụ usoro. Ọ ghọọ “ọhụrụ pụta ìhè” na nrapado kpọọ nhazi ahịa…
Nyochaa usoro mmepe nke imepụta na 2021
2020 bụ afọ siri ike maka mmepe akụ na ụba ụwa, ebe ụwa na-agba mbọ ime ihe mmetụta nke COVID-19. Nsogbu na ohere bụ akụkụ abụọ. Anyị ka nwere nchekwube banyere n'ichepụta…
Kaadị Laser Laser - Newzọ Ọhụrụ iji Agba Ekeresimesi 2020
Laser ịcha kaadị ekele nwekwara ike ịmepụta ọtụtụ na-atụghị anya mmetụta, na-eche ka ị chọpụta. Ọ bụrụ na i nwere mmasị na laser-ebipụ kaadị ekele ma ọ bụ laser-ebipụ akwụkwọ crafts, welcome kpọtụrụ goldenlaser…
Nkenke Manufacturing ịchụso magburu onwe
Ngwọta Laser Na-eduga Ndị Na-enye Ihe
Site afọ 20 'ahụmahụ na laser ụlọ ọrụ, nọgidere na-emepe emepe na iji elu teknụzụ, Golden laser aghọwo a na-eduga emeputa nke laser igwe na ọkaibe customization ikike.
Golden Laser na-enye gị ọkachamara laser ngwọta maka gị kpọmkwem ngwa ụlọ ọrụ - na-enyere gị dịkwuo arụpụtaghị, mfe nhazi usoro na-eme ka ndị ọzọ uru.
Na esenidụt ahịa, Golden Laser eguzobewo a tozuru okè ahịa netwọk na ihe karịrị 100 mba na mpaghara ụwa dum, na anyị asọmpi ngwaahịa na ahịa na-agba mbọ ọhụrụ usoro.
Ọhụụ Laser cutter
Galvo Laser igwe
Ekpo ọkụ katalọgụ
Ihe ngosi zuru ụwa ọnụ
Rịba ama gbasara iwu